DEG DEG-Cabsi Soo Wajahdey Taliska Somaliland iyo Ciidankii Ugu Badnaa oo Degey Hareeraha Tukaraq.
Puntlandnews.net (Laascaanood)-Wararkii ugu dambeeyey ee warbaahinta Puntlandnews Laascaanood ku soo dhacaya ayaa sheegaya in taliska ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq ay soo food saartay cabsi iyo xaalad dagaal.
Ciidamada maamulka Somaliland ayaa lagu soo waramayaa inay hadda goobo iyo fariisimo isku dhow isugu guurayaan kadib markii hareeraha deegaanka Tukaraq ay buux dhaafiyeen cutubyo katirsan ciidamada difaaca ee Puntland.
Ciidanka Puntland oo ka yimid gobolada qaar iyo kuwa horay saldhigyo ugu lahaa Bixin, Buura-wadal, Fallayr-yaale iyo God-qaboobe ayaa maalmihii ugu dambeeyey kaabiga saaray Tuulada Tukaraq oo malayshiyaadka Somaliland gacanta kuhayaan.
Taliska guud ee ciidanka oo horay u oollaa deegaanka God-qaboobe ayaa wararku sheegayaan in si rasmi ah loogu raray duleedka Tuulada Tukaraq, taasi oo cabsi xoogan ku abuurtay ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq.
Sidoo kale waxaa heegan culus lageliyey fariisimo cusubna la wareegey ciidamada difaaca dowladda Puntland ee ku sugan deegaankaasi, waxaana taliska guud ee ciidanku uu dhowaan sheegay inay u diyaar garoobayaan xoraynta gobolka Sool.